I-Range Rover Sport SVR: imininingwane, izithombe kanye nokubuyekezwa
I-Range Rover Sport iyimoto ehamba phambili emgwaqweni ongasemgwaqweni owakhiwa yi-automaker yaseBrithani ngokusekelwe ngaphambili, Ukutholakala 3. Le moto imisele isikhangiso sokunambitheka okuhle nokuhlonishwa. Futhi yingakho kungenxa yakhe, futhi nazo zonke izici zayo nezici ukutshela ngokuningiliziwe.
Isibonelo seRange Rover Sport senziwa ngo-2004 eDetroit. Inhloso yalo mdlalo kwakuwukudlulisela abashayeli nabagxeka ukuthi yiziphi izici eziyinhloko zeseveli esizayo. Imodeli ye-serial yavela ngonyaka odlule - ngo-2005. Izilaleli zathola isikhukhula esinamandla, sezemidlalo esakhiwe esiteshini se-Model Discover kanye nomzimba webhizinisi. Abathuthukisi bazama konke okusemandleni ekwenzeni imoto ehlanganisa ukujabula okukhulu ngokushayela ngokusebenza, kodwa inhloso yonke nge induduzo enkulu. Ububanzi bamathuba nemininingwane yomgwaqo ehloniphekile - lezi yizici eziyinhloko zobuhle phakathi no-2000 kusukela enkampanini yaseBrithani.
Ingaphandle yezemidlalo ye-Range Rover Sport model ayibonakali nje kuphela ngophahla olungaphansi futhi i-geometry yezinsika ezingemuva. Ukunakwa okuningi kudonselwa imininingwane ehlelwe ngokucophelela. Lezi ziphazamiso zomshini we-twin wokukhipha kanye nomoya othakazelisayo ufaka. Kanti futhi, izindlela zokuqhaqhaza umkhiqizo kanye nemibala ehlukahlukene kakhulu ayikwazi ukungaqapheli. Futhi kuyaphawuleka ukuthi abanikazi balo moto banethuba lokunciphisa ukumiswa kwemoya. Ifakwe kulo msebenzi. Ngendlela, kuyasiza kakhulu, ikakhulu lapho kudingeka khona ukwandisa ukuzinza ngesivinini esiphezulu.
Ihlaziya isimiso sokumiswa esibizwa nge-Terrain Response. Nguye ohlaziya umgwaqo futhi ukhetha imodi esekelwe kwedatha etholakele. Umshayeli udinga kuphela ukuhambisa ushintsho endaweni efunayo. Ngendlela, izici zomzimba ezivelele (futhi inefreyimu ehlangene) zinikeza ukuqina okuhle kakhulu ekuguquleni. Lokhu kwenza kube kungenzeka ngisho nangamasondo avuliwe evulekile ukuvula noma yimuphi umnyango futhi aphume emotweni. Noma, ngokuphambene, buyela ngaphakathi.
Ngokokuqala ngqa imishini evela enkampanini yaseBrithani "Land Rover" yaqala ukuvela izinjini eziguqulwa kusukela "Jaguar" eqinile. Ngakho-ke, inguqulo yeRange Rover Sport HSE ine-300-hp 4.4-litre unit atmosphere. Kumodeli eyaziwa ngokuthi i-Supercharged, kunenye enye imoto. Ikhiqiza amaningi "amahhashi" angu-390 anevolumu lama-4.2 amalitha. Futhi lokhu, eqinisweni, i-V enjenge-"ayisishiyagalombili". Yilo injini eyenza le moto imodeli esheshayo futhi enamandla kakhulu emlandweni we-Land Rover. I-motor ngayinye inezivikelo ezinhle kakhulu ngothuli, amanzi, ukungcola, kanye nanoma yini enye engase ivele emgwaqweni. Futhi leli qiniso alimangazi. Phela, iRange Rover Sport iyinkosikazi yangempela, eyabumba kalula ubumba futhi inqoba izithiyo zamanzi.
Lena imoto yemoto yonke. Futhi i-torque isakazwa nge-6-band adaptive "othomathikhi" ZF. Lokhu kudluliselwa kunemodi yokusebenza yezemidlalo. Ibuye ifakwe uhlelo olubizwa ngokuthi i-Command Shift. Siyabonga ukuthi ungashintsha ngesivinini ngesandla. Uhla oluphansi lwe "othomathikhi", olwenzelwe ukusetshenziswa ezimweni zomgwaqo ezinzima, lusetshenziswe inkinobho ekhethekile kagesi. Ungachofoza kuwo ekuhambeni.
Enye imininingwane ephakeme ye-tech iyona umahluko ophakathi, ohlonyelwe ukulawula i-electronic.
Ngakho, ngenhla kwabikwa ngamabhayisikobho okuqala "Range Rover". Kodwa manje kudingeke ukuba uqhubekele ekuveleni komnyaka wamanje. Futhi yilo Range Rover Sport SVR, imoto enelungelo lokubizwa ngokuthi imoto yomsebenzi wezemidlalo. Ngoba kunjalo! Kuyathakazelisa ukuthi i-Range Rover Sport SVR isivele ihambele iNorop Loop yeNorburgring. Futhi imodeli entsha idlulisele umbuthano ngemizuzu engu-8.14 kuphela! Umphumela omuhle, ngendlela, phakathi kwama-crossovers nama-SUVs. Futhi kakade lesi simodeli sinamandla kakhulu emlandweni wenkampani.
Uyini umehluko phakathi kweRange Rover Sport SVR? Ukubuyekezwa kuvame ukuqala ngaphandle. Le ntsha ithole amasondo angama-alintshi angu-21- alloy - alloy, "igobe" kumathayi enkathi yonke, ubukhulu bayo buyi-275 / 45R21. Njengokuzikhethela, abathengi abangakwazi ukuhlinzekwa banikezwa amathayi aziwa ngokuthi uConti Sport Contact 5 evela e-Continental. Zinezinga elincane kakhulu - 295 / 40R22. Ngaphambi kwe-bumper, ukufaka umoya omningi kungabonakala ngukuthi ukupholisa okusebenzayo kwamayunithi kanye nemihlangano kwenzeka.
Umzila ophahleni uphinde ubambe iso lakho. Iphuma ngokuhlelwa okugqamile okuqhathanisa, okuphela nge-spoiler. I-bumper yangemuva iphinde iphumelele - eceleni kwemiphetho ye-diffuser kunezingcingo ezine zokukhipha amapayipi amabili. Ngendlela, ine-valves elawulwa yi-electronics. Ngokuvamile, isithombe sivumelana, sigcwalisekile, sinomuntu wezemidlalo - konke kusezinkambisweni ezinhle kakhulu zenkampani yaseBrithani.
I-Range Rover Sport SVR: Sibutsetelo
Izithombe eziboniswe ngenhla zibonisa ukuthi le moto inenani elingaphakathi. Ngaphakathi konke kulungiswa ngezinto ezibiza kakhulu. Kodwa yikuphi ukunakwa okukhanga kudizayini ngokwayo! Ezemidlalo, kodwa kakhulu! Lesi isici seveli. Izihlalo zezemidlalo zebhakede ezithakazelisayo kakhulu. Isikhumba esinyene nesibhakabhaka sokuhlobisa sibonakala sicebile kakhulu. Kodwa into eqhakazile yi-monitor ye-computer engu-12.3-intshi, ehambisana nesikrini sokuthinta. Itholakala kukhonsoli ephakathi.
Futhi ku-torpedo ephakathi kunqunyelwe ukubeka uhlelo oluhlakaniphile olubizwa ngokuthi iTerrain Response 2. Lulona luqukethe "ubuchopho obubuchwepheshe". Yiloluhlelo oluhlala lubheka futhi luhlaziya umgwaqo futhi luqinisekisa ukuthi umshini uvumelanisa nesimo ngokushesha. Ngisho noma umshayeli engaboni "ngokuqeda" isibuko esihlangothini esihlahleni, lolu hlelo lukhathazeka kusengaphambili.
Manje kufanele utshele ngecala lobuchwepheshe beRange Rover Sport SVR. Izimpawu zalo mdlalo wemidlalo yemidlalo, Yebo, ezingeni elihle. Ngaphansi kwe-hoode yesimodeli kufakwe i-V enjenge-8-cylinder injini, ivolumu yayo engu-5000 cm³ (!). Ifakwe i-supercharger. Le injini ikhiqiza amahhashi angu-550. Kuyathakazelisa ukuthi lowo owandulela kulo modeli unemoto engenamandla. Ukuze uqonde kakhulu, kunama-"amahhashi" angu-40 ngaphansi kwalokho. Futhi lo mshini uhanjiswe ngokudluliselwa kwejubane eliyisimanje. Ngokuvamile, lokhu "okuzenzakalelayo", okubizwa ngokuthi ummeleli we-ZF 8HP70 uchungechunge.
Yiqiniso, i-Range Rover Sport SVR, isithombe esinikezwe ngenhla, imoto yemoto yonke. I-torque isatshalaliswa ngokulingana nesilinganiso sama-50 kuya ku-50. Kodwa! Uma kunesidingo, umshayeli angakwazi ukuqondisa kabusha umzila we-axle ngaphambili noma e-axle yangemuva. Konke kuncike ekutheni uyayidinga kanjani. Lena umsebenzi olula kakhulu.
Le SUV ingasheshisa ku-100 km / h ngemizuzwana engu-4.2 kuphela. Futhi ijubane elikhulu liyi-260 km / h. Ilinganiselwe ngekhompuyutha (enezinkulungwane eziyi-10 ngaphezulu kunejwayelekile).
Njengoba kungase kuqondwe kusukela ngenhla, i-Range Rover Sport SVR inezincazelo eziphezulu kakhulu zokusebenza. Kodwa akukhona konke okungatshelwa mayelana nomodeli.
Isibonelo, imoto ingabonisa izici zayo hhayi nje kumathrekhi. Ngenxa yokumiswa kwe-pneumatic itholakala ngokuzimela ukuze ilungise imvume yokugcina indawo. Lokhu kungukuthi, ungakwazi ukuvumelanisa umshini cishe noma yimuphi umgwaqo (noma endaweni lapho kungekho khona izembozo nhlobo). Kuyaziwa ukuthi lo modeli wathola uhlelo olubizwa nge-Wade Sensing System. Kungenxa yakhe ukuthi kungenzeka ukuthi ulinganise ukujula kwelanga, okushayela umshayeli ku-SUV yakhe. Ukuhlolwa nokuhlolwa kokushayela kubonise ukuthi lo mshini uyakwazi ukudlula i-ford ngobubanzi obungamamitha angu-85! Futhi ngisho nale moto ingakhipha kalula i-trailer, isisindo sayo singamathani amathathu. Njengoba ungabona, umshini uhlukile ngempela. Kusebenza nokusebenza, akuthathi.
I-SUV entsha enamandla yayitholakale e-US ngonyaka ka-2015 ngezindleko ze-$ 110,475. Lona isethi encane. Kuyini eRussia? Singakwazi futhi ukuthenga le moto. Hhayi emasiloni, kodwa kulabo bantu abalethele imoto ngokwabo.
I-version ene nophahla lwama-panoramic, i- salon ehlanganisiwe, uhlelo lwe-Meridian 1700 W audio kanye nemishini ehlukile, uhlu olubalwe ezinkhundleni eziningi, luzobiza cishe ama-ruble ayizigidi ezingu-11.
Futhi ku-salons okwamanje itholakale onobuhle ezintsha ku-5.0 S / C AT HSE Dynamic. Izici zale mishini yilezi 510-horsepower injini 5-litre kanye nohlu olubanzi lwemishini. Ngaphakathi, kukhona konke okungadingeka: I-ABS, i-anti-slip, ukuqondisa kwamandla kagesi kanye nokulungiswa kwayo, i-parktronic, ukushisa (yonke indawo), uhlelo lwekhamera elizungezile, iphakheji lezinketho Ku-Control ™ Connect nokunye okuningi. Izindleko zemoto enjalo zizoba ngamaruble ayizigidi ezingu-8. Kungakhathaliseki ukuthi kwakunjani, kodwa ezimotweni ezinjengoba ziningi abathengi njalo.
Futhi ekugcineni, amagama ambalwa mayelana nokuthi abanikazi bakhuluma kanjani ngale moto kanye nabantu nje abawaziyo. Bahlukanisa izinzuzo ezintathu eziyinhloko: amandla, induduzo nokuziphatha. Kunamaphuzu amabili kuphela, kodwa okuwukuphela kwezinto ezifanelekile (kusukela inani eliphezulu libhekisela kokubili). Futhi kuqukethe ukukhuthazela okuphansi kwezinye izingxenye ze-elekthronikhi nokusebenza gear. Isibonelo, ikhompuyutha ebhodini ngezinye izikhathi inganika amaphutha kwezinye indawo, leyo eyanyamalala. Noma kunjalo, kuyakhuthaza ukuthi ayikho imibono engalungile kumaphuzu aphambili. Okunye kungalungiswa.
Isixhumi kwesifo: idivayisi nokuqashwa
Is uphethwe futhi igaya kanjani isilinda ikhanda?
Test Drive: "Kia Optima" (2014). Photography, umklamo kanye Ukucaciswa
Indlela ukupenda imoto ngokwakho
Uhlelo ukuthungela. Imininingwane uhlelo ukuthungela: isikimu, isimiso wokusebenza
Lamborghini Reventon, Supercar enamandla umsuka Italy
Massage izihlalo - isixazululo ehlukile Labo abasiqaphelayo induduzo
Baningi ekhubazekile defies ehlane ngesikhathi imincintiswano international e ngebhayisikili Uhae
Lesi sifo ka hyperactivity futhi ukungakwazi ukugxilisa ukugula ngengqondo izingane: ukwelashwa
Ukwelashwa e Israyeli Asaf ha Rofé
Izici zogama ezingapheli zesenzo
Amahhotela Kirovograd: Ukubuyekeza
Lomshado Georgian - emadilini elikhanyayo kakhulu futhi bejabule
Indlela yokwakha e-book yakho? Uhlelo engcono ukubhala izincwadi